Duubista ilmahayga ee dugsiga | USAHello | USAHello
Si aad u bilowdo ilmahaaga dugsi oo dalka Mareykanka ah waa inaad marka hore ilmahaaga u qoraan sida ardayga. Tani waxay ka dhigan tahay in aad u baahan tahay in ay soo booqdaan dugsiga iyo saxiixa waraaqaha si ay dugsiga aqbali karaan ilmahaaga. Raadi wax ku saabsan waraaqaha aad u baahan tahay iyo sida aad ilmahaaga uga diiwaangeliso iskuulka. Read ku saabsan meeleynta iyo fasalka gaar ah. Read ilmahaaga rabitaanka, iyo waxa la sameeyo haddii ilmahaagu maqan yahay, iyo sida loo helo dugsiga.
sannadka uu ilmahaagu waxa uu ku dhashay iyo meesha aad ku nooshahay go'aamin doona dugsiga in carruurtaada tegi doonaa. U fiirso dugsiga dadweynaha degaanka.
Diiwaangelinta ardayda Maraykanka u dhaxeysay loo baahan yahay 6 Oo 16 Year. Gobolada qaar, da'doodu kala duwan tahay waxaa laga yaabaa in hal ama laba sano. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in Aqoonta iyo weligiis iyo Tirada Sanooyinka ee gobolka.
Imaanshaha joogtada ah waa mid aad muhiim u ah ardayda aad. Socodka Imaanshaha dugsiga. qayb sharciga Waxaad ka heli kartaa haddii ardayda aad lumiso badan oo maalmo dugsi. Waxaad ka heli doontaa digniin badan haddii ardayga uu bilaabay in ay lumiso badan oo maalmood. Tirada dhabta ah ee qaybaha kala duwan ee kala duwan ee waxbarashada.
Tusaalooyinka Maqnaanshaha xaq
Tusaalooyinka Maqnaanshaha aan cududaar
Ka maqnaanshaha dugsiga xannaanada oo aan u sheegay dugsiga
Imaanshaha daahay dugsiga. dib u dhac ayaa sidoo kale loo yaqaan daaheen. Dib u dhaca soo cududaar karo iyo cudurdaar la'aan. Fasax u dhac uu leeyahay liiska isku maqnaanshaha cudurdaar.